दक्षिण अफ्रिकाका लागि डा विश्वकर्मा राजदूत नियुक्त
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्का सिफारिशमा डा निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेकी छन् । विस्तृतमा
बिहीबार ८३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु !
बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालका राजदुतद्वयले शपथ लिए
कटाक्षे हाटबजारको अस्तित्व हराउँदै
काभ्रेमा फरार अभियुक्त पक्राउ गर्ने प्रहरीको अभियान
अमृत सिंहको हत्याका पाँच अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
नारायणगढ–बुटवल सडक: निर्माण भए २२ पुल
प्रचण्डको सुरक्षाको लागि पूर्वलडाकु खटिए
काठमाडौँ । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षाको लागि पूर्वलडाकुहरु खटिएका छन् । सरकारले सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको संख्यामा कटौती गरेपछि पूर्वलडाकुहरु प्रचण्डको सुरक्षाको लागि खटिएका हुन् ।
सुनसरीमा पिकअपको ठक्करबाट मोटरसाईकल चालकको मृत्यु
सुनसरी । सुनसरीमा पिकअपको ठक्करबाट मोटरसाईकल चालकको मृत्यु भएको छ । रामधुनी ३ बस्ने २२ बर्षीय सुरज चौधरीको मोटरसाईकल दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको हो । बुधबार राति पौने १० बजे रामधुनी राजमार्ग स्थितमा को २ च ३३१२ नम्बरको पिकअप भेनले को ३१प ३१४७ नम्बरको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिदाँ मोटरसाईकल चालक चौधरी गम्भिर घाईते भएका थिए ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा राखिएका निर्माण सामग्री र त्यहाँ भएका अस्थायी भौतिक संरचना हटाउने कार्य थालेको छ । गोर्खा भूकम्पका कारण पूर्णरूपमा भत्किएको दरबार हाइस्कुल सञ्चालनका लागि अस्थायी टहरा, स्कुल निर्माणका सामग्री र वीर अस्पताल निर्माणका लागि सामग्री राखिएको थियो ।
काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा (साउन ६९, असोज ९१, मङ्सिर १६१, पुस ११७ र माघ पहिलो सातासम्म ४०) ४७८ वटा नयाँ अनलाइन दर्ता भएका छन् ।
चितवन । राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरीशिकारी र प्राकृतिक कारणले निरन्तर गैँडा मर्ने क्रम रोकिएको छैन । बुधबार दुई वर्षको पोथी गैँडा (केटी) मृत फेला परेको हो ।
काठमाडौँ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी अझ सेलाएको छैन । कतिपय मुलुक त बन्दाबन्दीमै छन् । नेपालमा भर्खर खोप अभियान शुरु भए पनि यसको त्रास कायमै छ तर कोरोना सन्त्रासकै बीच वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तेस्रो मुलुक जाने युवाको सङ्ख्या उत्तिकै छ ।
किन इजरायलको रोजगारीमा जान पाएनन् नेपाली ?
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समयमै कार्यविधि तयार नगर्दा इजरायलको रोजगारीमा नेपालीहरू जान पाएका छैनन् ।
काठमाडौँ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागहरुमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
संसदीय समितिले भन्यो, ‘प्रि क्वालिफाइड’ सम्बन्धी प्रक्रियामा अनियमिताको उजुरी किन आयो ?
काठमाडौँ । तराई÷मधेस द्रुुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत ‘फेज–टुु’ को ठेक्का विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आज राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिएको छ ।